The Galaxy J3 na-anata Wi-Fi asambodo na gam akporo 7.0 Nougat | Gam akporosis
Galaxy J3 na-anata Wi-Fi asambodo na gam akporo 7.0 Nougat
José Alfocea | | Samsung, Gam akporo nsụgharị
Ekwentị, nke ihe nlereanya ya ga-adaba na Samsung Galaxy J3 na-abịa site na 2017, anatalarịrị asambodo Wi-Fi. Nke a bụ oge nke abụọ nke ngwaọrụ a natara asambodo a, agbanyeghị, ugbu a enwere ọdịiche dị mkpa: oge a ọ bụ na gam akporo 7.0 Nougat, Google sistemụ arụmọrụ kachasị ọhụrụ sitere na Google.
Dika emere site na Sammobile, nke bu eziokwu, na otu ihe natara asambodo na agba ohuru nke sistemụ arụmọrụ gam akporo emeghe, na-egosi na mwepụta "dị n'akụkụ nkuku".
N'ezie, anyị ekwesịghị ichefu eziokwu na anyị na-eche echiche. A na-enye Galaxy J3, mana ụbọchị ntọhapụ ya amachaghị. N’agbanyeghi nke ahu, enwere ihe n’egosi na igba egbe ya n’abia n’oge na adighi anya. N'ezie, Fraịdee gara aga, Jenụwarị 6, Galaxy J3 malitere ịbanye n'aka ndị ọrụ site na igosi na weebụsaịtị Samsung. Otú ọ dị, ebe nrụọrụ weebụ a kwuru na ọ na-agba gam akporo 6.0.1 Marshmallow. “N’ịhụ na ngwaọrụ a dị ọhụụ, ọ dị anyị n’anya na ụlọ ọrụ ahụ anaghị eji Nougat ebute ya,” ka ha rụtụrụ aka na Sammobile.
N'agbanyeghị nke a, ma ọ bụrụ na Samsung Galaxy J3 abịarute na gam akporo 6.0.1 Marshmallow, nke a na-egosi na ọnụ ahụ ga-enweta mmelite na gam akporo 7.0 Nougat, nakwa na ọ ga-eme ya n’oge na-adịghị anya, ihe ga-eme ka ndị na-azụ ya nwee obi ụtọ.
The Galaxy J3 nke 2017 ga-abụ obere mmalite nke ihe nlereanya emere na 2016; nwere otu ihuenyo nke 5 sentimita asatọ na 720p ma ọ nwere a Octa-isi Qualcomm Snapdragon 43 processor0 na 2GB Ram na 16GB nke nchekwa esịtidem, kama mgbawa Exynos, 1.5GB RAM na 8GB nke ikike nchekwa nke onye bu ya ụzọ. O nwekwara a 5 megapixel isi igwefoto na 2 megapixel n'ihu igwefotoyana a 2.600mAh batrị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Galaxy J3 na-anata Wi-Fi asambodo na gam akporo 7.0 Nougat
Ihe kacha mma free ụdaolu, ụdaolu na ngosi gị gam akporo